Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Mitohy ny volana febily ny fironana fangatahana mpandeha ratsy
Ny fifamoivoizana mpandeha dia nianjera tamin'ny volana febroary 2021, samy nampitahaina tamin'ny ambaratonga talohan'ny COVID (febroary 2019) ary raha oharina amin'ny volana teo alohan'io (Janoary 2020)
Ny fitakiana totalin'ny dia an-habakabaka tamin'ny volana febroary 2021 dia nilatsaka 74.7% raha oharina tamin'ny febroary 201
Ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena tamin'ny volana febroary dia 88.7% ambanin'ny febroary 2019
Ny fitakiana an-trano tanteraka dia nidina 51.0% raha oharina amin'ny krizy mialoha (Febroary 2019)
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanambara fa ny fifamoivoizana mpandeha dia nianjera tamin'ny volana febroary 2021, samy nampitahaina tamin'ny ambaratonga talohan'ny COVID (febroary 2019) ary nitaha tamin'ny volana teo alohan'io (Janoary 2020).
Satria ny fampitahana eo anelanelan'ny valiny 2021 sy 2020 isam-bolana dia voarebirebin'ny fiatraikan'ny COVID-19 tsy manam-paharoa, raha tsy misy fanamarihana hafa raha tsy amin'ny febroary 2019 ny fampitahana rehetra, izay nanaraka lamina fangatahana mahazatra.
Ny fitakiana totalin'ny dia an-habakabaka tamin'ny volana febroary 2021 (refesina amin'ny kilometatra mpandeha amin'ny fidiram-bola na RPK) dia nidina 74.7% raha oharina tamin'ny febroary 2019. Izany dia ratsy kokoa noho ny fihenan'ny 72.2% voarakitra tamin'ny volana janoary 2021 raha roa taona lasa izay.
Ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena tamin'ny volana febroary dia 88.7% ambanin'ny volana febrily 2019, fihenam-bidy bebe kokoa noho ny fihenan'ny 85.7% isan-taona izay voarakitra tamin'ny volana janoary ary ny vokatra fitomboana ratsy indrindra hatramin'ny volana jolay 2020. Niharatsy ny fahombiazan'ny faritra rehetra raha oharina tamin'ny Janoary 2021.
Ny fitakiana an-trano tanteraka dia nidina 51.0% raha oharina amin'ny krizy mialoha (Febroary 2019). Tamin'ny volana Janoary dia nilatsaka 47.8% izany tamin'ny vanim-potoana 2019. Izany dia noho ny fahalemen'ny dia tao Shina, notarihan'ny governemanta hangataka ny hipetrahan'ny olom-pirenena ao an-trano mandritra ny vanim-potoana fitsidihan'ny Taom-baovao.
“Ny volana febroary dia tsy naneho velively ny famerenana amin'ny laoniny ny fangatahana fitaterana an'habakabaka iraisampirenena. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny tondro dia nandeha tamin'ny làlan-diso satria nihamafy ny fameperana ny fitsangatsanganana manoloana ny ahiahy mitohy momba ireo karazana coronavirus vaovao. Ny tsena maningana dia ny tsena anatiny aostralianina. Ny fialan-tsasatry ny famerana ny sidina an-toerana dia nahatonga fitsangatsanganana bebe kokoa. Izany dia milaza amintsika fa tsy very ny faniriany handeha ny olona. Hanidina izy ireo, raha vitan'izy ireo izany nefa tsy miatrika fepetra en quantantine », hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.